Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Oromia Kaqarxay & Khasaare Balaadhan oo Ka dhashay.
Dagaal Oromia Kaqarxay & Khasaare Balaadhan oo Ka dhashay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Hamaraysa ee bariga Oromia ayaa sheegaya dagaal dhex maray ciidanka gaarka ah ee qoomiyada Tigreega ku abtirsada ee Agaziga looyaqaano iyo kooxda Hawaarinta ee kasoo jeeda Gobolka Oromada.
Sida xogta aan kuhelayno dagaalka ayaa dhacay kadib marii ciidanka dhaqanka xun ee Agazigu ay dad barakacayaal ah oo Oromo ah oo Ogadenia kasoo barakacay ay ku amreen in ay dib ugu laabtaan dhulkii ay kasoo qaxeen ee Ogadenia.
Hase yeeshee dadkii qoxootiga ahaa ee Oromada ayaa siwayn ugu gacan saydhay dalabka ciidanka Agaziga iyagoo sheegay in aysan ku amaan helaynin wadanka Ogadenia, isla markaana ay dib usii joogi doonaan meesha ay hada kusugan yihiin oo Oromia ah.
Intaas kadib ciidanka Agaziga oo doonaya in ay mar kale colaadii Ogadenia iyo Oromia qaraxdo ayaa dadkii qoxootiga ahaa usheegay in qasab lagu rari doono, cidii diidana ay ciqaab xabsi iyo jidh-dil ah la kulmi doonto loona baahan yahay in ay si dhakhso ah ulaabtaan.
Hase ahaatee ciidan kusheega Hawaarinta ee qoomiyada Oromada kasoo jeeda ayaa sheegay in aysan shacabku noqon doonin isla markaana ay joogaan dhulkoodii hooyo loona baahan yahay in ay xukuumada wayaanuhu u fidiso taageero balaadhan si ay uga soo kabtaan dhibkii soogaadhay.
Goob jooge kusugan magaalada Hamaraysa ayaa sheegaya in ay ciidanka Agaziga oo aad ucadhaysan weerar kusoo qaadeen dadkii shacabka ahaa iyo ciidankii dabaqoodhiga oo wada jooga, halkaas oo uu kadhacay dagaal faraha laysula tagay.
Dhimasho labada dhinac ah iyo dhaawac aad ubadan oo koxihii dagaalamay iyo shacabkii qoxootiga ahaa ayaa lasheegayaa in ay goobta kadhalatay mana jiro wax dhex dhaxaadin ah oo goobta gaadhay ilaa iyo hada.